ပြတ်ရှဒဏ်ရာ သို့ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ရေသတ္တဝါ၊ ကလေး - Hello Sayarwon
ပြတ်ရှဒဏ်ရာ သို့ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ရေသတ္တဝါ၊ ကလေး
ရေသတ္ထဝါကြောင့်ဖြစ်သောပြတ်ရှဒဏ်ရာဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ရှိအဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါကိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ငယ်သောကလေးများတွင် ရေလောကကိုသိလိုစိတ်များသောကြောင့်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ခန္ဓါကိုယ် အဓိကအားဖြင့် ခံစားလွယ်သောအရေပြားကိုကာကွယ်ရန် သတိမထားမိတတ်ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး ရှေးဦးကုသနည်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ ပြဲစုတ်ဒဏ်ရာကအဓိကဖြစ်တတ်သည်။ ပြဲစုတ်ဒဏ်ရာက သွေးထွက်သည် သို့သော် များသောအားဖြင့် တစ်သျူးအပျော့သာဒဏ်ရာရပြီး ထိုထက်မပိုတတ်ပါ။
ပြတ်ရှဒဏ်ရာသည် အရေပြားရှိတွယ်ဆက်တစ်သျူးများပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စုတ်ပြဲဒဏ်ရာနှင့်မတူပါ(ပွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရေပြားနည်းနည်းုမှပျက်စီးခြင်းမဖြစ်ပါ။ အရေပြားကွဲသွားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကွခြင်းသည် စူးရှသောအရာကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။(ဥပမာ ဒါး သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သောပုလင်း)
ပြတ်ရှဒဏ်ရာသည် စူးရှသောအရာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြတ်ရှခြင်းဒဏ်ရာနှင့်ရှခြင်းကဆင်တူသည်။ ငါးနှင့်အခြား ရေသတ္ထဝါကိုက်ြခ်ငးကြောင့် ပြတ်ရှခြင်း စုတ်ပြဲခြင်းပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကိုက်ခံရသောသူသည် ငါးအမျိုးအစား တိရစ္လန်အမျိုးအစားခွဲခြားရန်လိုအပ်သည်။ တိုက်ခိုက်ခံရပုံ တိုက်ခိုက်ခံရချိန်တို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
၂။ ရေသတ္ထဝါကြောင့်ဖြစ်သော ပြတ်ရှဒဏ်ရာရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာလဲ။
သွေးထွက်ခြင်းကြောင့် ရောဂါအခြေအနေကို အလွယ်ကူဆုံးသိနိုင်သည်။ နက်သောပြတ်ရှခြင်းကအောက်ရှိတစ်သျူး ဥပမာ အဆီ အရွတ်ကြွက်သားသို့မဟုတ် အရိုးများကိုပေါ်လာစသည်။ ပြတ်ရှဒဏ်ရာသည် ပုံစံမျိုးစုံ အရွယ်အစားမျိုးစုံဖြစ်နိုင်သည်။ အရည်ပြားပွင့်သွားခြင်းကြောင့် ပြတ်ရှ စုတ်ပြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အနာက နာနိုင်သည် သွေးထွက်ခြင်း ညိုမဲစွဲခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောခန္ဓါကိုယ်ရှိ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ဥပမာ ဦးရေပြားတွင်ဖြစ်ပါက သွေးအများအပြားထွက်နိုင်သည်။ အနာအစွန်များက ကပ်နေခြင်း ဝေးကွာနေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အနာတစ်ဝက်တွင် ထုံခြင်း နှင့် အနာဘေးနားလှုပ်ရှားမှုသိပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သွေးထွက်ခြင်းအရေပြားပျက်စီးခြင်း နှင့် ကိုက်ခံရသော အရေပြားပါသွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုက်ပြီးနာခြင်း နှင့် ကိုက်သောနေရာတဝက်လှုပ်ရှားရန်ခက်ခြင်း။
နီခြင်း နာခြင်း သို့မဟုတ် အနာတစ်ဝှက်ပူခြင်း နှင့် ပြည်ထွက်လာခြင်း။ ဖျားခြင်း။
နီခြင်း အနီစက်ပေါ်ခြင်း ရေကြည်ဖုပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအရေပြားပြောင်းလဲခြင်းများဖြစ်ခြင်း။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဖျားခြင်း ချမ်းတုန်ခြင်း ချွေးထွက်ခြင်း အားနည်းခြင်း ကြွက်တက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆိုးဝါးစွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း အသက်ရူပြသာနာများ မေ့လဲခြင်း တက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
၃။ ရေသတ္ထဝါများကြောင်ဖြစ်သော ပြတ်ရှဒဏ်ရာများသင့်ကလေးတွင်ရှိပါက သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရုံနှင့်သက်သာနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ပြတ်ရှဒဏ်ရာဖြစ်က အခြားဆေးဝါးကူညီမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်။
ကိုက်ပါက အကိုက်ခံရသောနေရာကိုရေဖြင့်ဆေးပါ။အပျော့စားဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်ဆေးချခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ထိုနောက် အနာဖြစ်သောနေရာပေါ် သို့ သန့်စင်သောအဝတ်ဖြင့်ဖိထားခြင့်ဖြင့် သွေးထွက်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ရေသတ္ထဝါ၏သွားကိုမနှုတ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက သင့်ကြွက်သားသို့မဟုတ် တစ်သျူးကိုထိခိုက်စေသည်။ သင်ကို့ဂရုစိုက်ကူညီမည့်သူရောက်လာသည်အထိ စိုက်မိနေသောသွားကိုမဖယ်ပါနှင့်။
ဆူးစူးခြင်း။ ရေဘဝဲလက်တွယ်နေပါက သင့်အရေပြားမှ မဖယ်ခင် ရှာလကာရည်ဖြင့် အနည်းဆုံးဆယ်မိနစ်ခန့်ဆေးချပါ။ အရက်ကိုမသုံးပါနှင့်။ အရက်က ရေဘဝဲလက်ရှိ အဆိပ်ကိုပိုထွက်စေသည်။ ဇာဂနာငယ်ကိုသုံးပြီး ဖယ်ပါ။ သင်လက်ဖြင့်မကိုင်ပါနှင့်။
အခြားဖယ်သောနည်းလမ်းမှာ အမွေးရိတ်ကရင် သို့မဟုတ် ဆိုဒါဖြင့်ပုံတင်လိုက်ပါ။ ထိုနောက် ဘရိတ်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ထုတ်ပါ။ သင်ကမ်းခြေသို့ရောက်နေပါက သဲနှင့် ပင်လယ်ရေကိုထည့်ပါ။ မိနစ် ၆၀မှ ၉၀လောက်ထိရေပူဖြင့်ဆေးချပါ။ ထိုနောက် တဖြည်းဖြည်းချင်းဆူးကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
မလုပ်ခင် လက်အိတ်စွပ်ပါ။ ပြင်းထန်သောပြတ်ရှဒဏ်ရာရှိ အပိုင်းအစကိုထုတ်ဖို့မကြိုးစားပါနှင့်။ အဆစ်သို့မဟုတ် အာရုံကြောနားတွငရှိနေသည်ထင်ပါက မဖယ်ပါနှင့်။ ဆူးစူးထားသောနေရာနားကိုဆက်ပြာရေနှင့်ဆေးချခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယားဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပါ။ နောက်ဆုံး ပိုးသတ်ဆေးအဆီသို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကောတီစုန်းခရင်ကို အနာသက်သာရန်လိမ်းပါ။
သို့သော် အကယ်၍ သင်တွင်အချို့သောလက္ခဏာ ဥပမာ အသက်ရူခက်ခြင်း သတိရရန်ခက်ခဲခြင်း လမ်းလျောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း ထုံခြင်းအစရှိသည်တို့ရှိပါက ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို၏အကူအညီကိုရှာပါ။
၄။ ရေသတ္ထဝါကြောင့်ဖြစ်သော ပြတ်ရှသောဒဏ်ရာကိုဘယ်လိုရှောင်မလဲ။
အကောင်းဆုံးသောကာကွယ်သောနည်းမှာ ရေသတ္ထဝါတို့၏အဝေးတွင်နေပါ။ ကမ်းခြေသို့သွားပါက ရေခူရှိမရှိလက္ခဏာရှိမရှိ သို့မဟုတ် အခြားအန္ဓါရယ်ရှိသည်ဟု ဆိုင်းပုဒ်ရှိမရှိကိုအရင်လေ့လာပါ။
ငါးမြှားသင်္ဘောများနှင့်ဝေးအောင်နေပါ.သွေးထွက်နေပါက ရေနှင့်ဝေးအောင်နေပါ။ သွေးက မိုင်ပေါင်းများစွာရှိ ငါးမန်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ငါးမုန်းကိုတွေ့ပါက ရေမှတတ်နိုင်သမျှစောစောထွက်လာသင့်သည်။
ရေတိမ်တွင်လမ်းလျောက်ပါက ရေတွင်ရှပ်တိုက်သွားပါ တိရစ္ဖာန်အပေါ်တိုက်ရိုက်ဖိပြီးမနင်းပါနှင့်။ တိရစ္ဖာန်လာနေသည်ဟုခံစားပါက နေရာမှရှောင်ပေးပါ။
အဝတ်အစားက သတ္ထဝါတို့၏ဆူးစူးခြင်း ရှခြင်းတို့မှကာကွယ်နိုင်သည်။ အရေပြားပေါ်ရှိ ဓါတုပစ္စည်းများက ငါးဖန်ခွက်ကိုမြူစွယ်နိုင်သည်။ ရေအောက်တွင်ဖိနပ်ဝတ်ခြင်းကလည်းကောင်းသည်။ သို့သော် အချို့သောသတ္ထဝါများတွင် ဖိနပ် ဝတ်စုံကိုဖောက်နိုင်သောအရိုးများရှိသည်ကိုသတိထားပါ။
အဆိပ်ပါ သတ္ထဝါက ကျောက်တုံးအောက်အစရှိသည်တို့တွင်လည်းရှိနေနိုင်သည်။
ပြတ်ရှခြင်းကိုကုသပြီး အနာကျက်သွားပါက အနာတဝိုက်ရှိ အရေပြားအရောင်ပြောင်းသွားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကို အက်ပီအပ်များသောလိမ်းစေးကိုသုံးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ နေ့တိုင်းနေနှင့်ထိသောအနာပေါ်တွင် လိမ်းနိုင်သည်။
Marine Animal Sting sOr Bites. http://www.nytimes.com/health/guides/injury/marine-animal-stings-or-bites/overview.html. Accessed August 21, 2016
Marine animal bite. http://www.emedicinehealth.com/wilderness_marine_bite/article_em.htm. Accessed August 21, 2016
Marine animal bite or sting. https://www.drugs.com/cg/marine-animal-bite-or-sting.html. Accessed August 21, 2016
Marine Animal Bites Or Stings. http://www.healthline.com/health/marine-animal-stings-or-bites#Prevention4. Accessed August 21, 2016
Marine Animal Stings Or Bites. https://medlineplus.gov/ency/article/000032.htm. Accessed August 21, 2016
Marine animal bites and stings. http://www.kpjampang.com/Marine-Animal-Bites-and-Stings-article-3202.html. Accessed August 21, 2016